Fiarovana amin'ny fampiasam-bola - World Trade Exchange
PROGRAMA FIAROVANA INVESTASIANA
arovy ny fampiasam-bolanao amin'ny loza mety hitranga, tsy fahombiazan'ny asa, tsy fahombiazana, fatiantoka ary tranga tsy ampoizina.
Raha tsy mandaitra ny fampiasam-bolanao, tsy manome ROI, mahazaka fatiantoka, mihena ny sandany, na tsy mahomby noho ny antony rehetra, ny IPP dia manome antoka fa hahazo 100% ny vola ampidirinao voalohany ary miampy ROI ao anatin'ny 24 ora.
Ny fampiasam-bola rehetra dia mitaky risika sasany, ary MISY TOA AZONAO AZO ATAO DAHOLO IZAO REHETRA!
Mitaky risika ny fampiasam-bola. Ny famatsiam-bola dia feno fihenam-bidy, fiovan'ny sandan'ny tsena, hosoka, fatiantoka ary risika tsy fahombiazana hatrany.
Na inona na inona fampiasam-bolao, misy foana ny mety hahavery anao ny zava-drehetra.
Ka inona no hitranga raha very izany rehetra izany?
Raha toa ny ankamaroan'ny olona ianao, dia tsy zavatra tianao hoeritreretina akory izany, mainka fa ianao no nitranga. Azonao atao ve ny manome toky fa tsy hisy zavatra tsy mety amin'ny fampiasam-bolanao? TSIA! Ka maninona ianao no mandehandeha nefa tsy misy fiarovana amin'ny fampiasam-bolanao?
Mila fiarovana amin'ny fampiasam-bola ianao satria tsy azonao antoka izay mety hitranga amin'ny fampiasam-bolanao rahampitso, amin'ny herinandro ho avy, na herintaona manomboka izao. Ireo mpamatsy vola hendry dia manao izay rehetra azony atao mba hampihenana ny vokatry ny hetsika tsy ampoizina amin'ny alàlan'ny fametrahana fiarovana sahaza ho an'ny fampiasam-bolany.
Ao no misy ny WTE Tonga ny programa fiarovana ny fampiasam-bola.
INONA NY wte PROGRAMA FIAROVANA INVESTASIANA?
Ny Program Protection Protection dia miaro ny fampiasam-bolanao rehetra amin'ny risika, tsy fahombiazana, fatiantoka ary tranga tsy ampoizina.
Mahazoa onitra an'ireo karazana hetsika na fatiantoka fampiasam-bola ao anatin'ny 24 ora. Tsy misy fomba ara-dalàna lava. Tsy mila fotoana, asa, na ezaka avy aminao.
Tsy maninona raha ny fampiasam-bolanao dia any amin'ny orinasa, tahiry, vokatra banky, trano / fananana, volamena sy volafotsy, safidy, vola fampiasam-bola, fividianana vola, derivatives, commodities, hedge fund, money market fund, obligations, mutual fund, tahirim-bola, mari-pankasitrahana (CD), vola crypto, ho avin'ny entam-barotra, ho avy fiarovana, vokatra fiantohana, zavatra sarobidy, fananana renivohitra, vola isan-taona, vola fifanakalozana fifanakalozana (ETF), sns.
Ny IPP dia manome antoka fa hahazo onitra amin'ireo karazana hetsika na fatiantoka fampiasam-bola rehetra ianao ao anatin'ny 24 ora tsy misy fombafomba ara-dalàna, fotoana, asa, na ezaka ilaina avy aminao.
Ny fiarovana ny fiarovana dia miaro ny fampiasam-bolanao amin'ny alàlan'ny famindrana ny risika fampiasam-bola avy aminao (ny mpampiasa vola) mankany WTE tsy mamindra ny fampiasam-bola ifotony na fananana hafa. Noho izany, azonao antoka ny tambin-karama feno ho an'ny fampiasam-bola raha misy tsy mandeha amin'ny fampiasam-bolanao na raha toa ka mahavita ambany noho ny antenainao izany.
arovy ny fampiasam-bolanao amin'ny risika sy fatiantoka
WTE Ny programa fiarovana amin'ny fampiasam-bola dia miaro ny fampiasam-bolanao amin'ireo risika sy fatiantoka ateraky ny tranga tsy ampoizina manaraka ireto:
Ny fihenan'ny sandan'ny fampiasam-bolanao na inona na inona antony
Fisolokiana amin'ny tsenambola, fihenan'ny vidiny, fanodikodinam-bola mialoha ny famoahana, ary fanodinkodinam-bola
Ny fatiantoka na fianjeran'ny orinasa iray nampanjarianao vola
Fitantanana orinasa sandoka sy fihetsika tsy marina ataon'ny orinasa iray
Tsy fahampian'ny fividianana vola, tsy fahampian'ny fiarovana azo antoka, ary tsy fisian'ny mpampiasa vola tena izy
Fampiasam-bola tsy mety aminao
Fifanakalozana ara-barotra anatiny, fomba fanao ara-barotra tsy ara-drariny ataon'ny brokers sy sub-brokers
Fampahalalana diso, na fanambarana diso hafa
Ny fahaverezan'ny vola sy ny fiarovana - toy ny tahiry sy ny fatorana
Amidy amina tahiry tsy misy dikany sy fiarovana hafa
Ny tsy fahombiazan'ny orinasa na ny fikambanana izay namoaka ny fiarovana anao
Fangatahana amin'ny broker noho ny toro-hevitra ratsy amin'ny fampanjariam-bola na amin'ny fahazoan-dàlana hampiasa vola tsy mendrika
Fanararaotan'ny tompon-trosa sy mpampindram-bola vitsy an'isa amin'ny tompon'andraikitra mifehy.
Loza voajanahary, krizy ara-toekarena, fandrahonana avy any ivelany, halatra, tsy fahombiazan'ny rafitra, hetsika ataon'ny governemanta, na krizy politika izay tsy voafehinao.
Rava ny banky
Ny fihenan'ny sandan'ny vola hafa na cryptocurrency toy ny Bitcoin
Fampiatoana ny asa aman-draharaha noho ny baiko fanidiana na famoahana entana navoakan'ny governemanta.
ohatra amin'ny FOMBA FOMBA NY INVESTMENTO
Ohatra, raha maharitra $ 100M ny fampiasam-bolanao amin'ny orinasa, tetikasa na tsena rehetra ianao WTE miambina ny fampiasam-bolanao amin'ny fandoavana $ 100M anao rehefa milaza ny fatiantoka amin'ny fampiasam-bolanao ianao.
Aoka hatao hoe miaina $ 7 miliara amin'ny sandan'ny fampiasam-bolanao $ 20B. Amin'izay, WTE miambina ny fampiasam-bolanao amin'ny fandoavana anao $ 20 miliara, izay sanda feno amin'ny fampiasam-bolanao rehefa milaza ny fihenan'ny sandan'ny fampiasam-bolanao ianao.
Tsy ilaina ny manala na manoratra. Izany dia miantoka ny fiarovana ny renivohinao; Ny soatoavin'ny fampiasam-bola dia voatazona sy azo antoka amin'ny tranga mety hisian'ny risika, hosoka, tsy fahombiazana, bankiropitra, fiovan'ny sandan'ny tsena ary ny tsy fetezana.
SOA NY PROGRAMA FIAROVANA INVESTASIASA
HANAMORANA ny risika rehetra amin'ny INVESTMENT
WTE Ny fiarovana ny famatsiam-bola dia afaka manampy ny mpampiasa vola hanafoana ireo loza mety hitranga amin'ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny famindrana ny loza mety hitranga amin'ny mpampiasa vola WTE tsy mamindra ny fampiasam-bola ifotony na fananana hafa.
Noho izany, azonao atao ny manafoana ny risika rehetra amin'ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny fampiasana ny 'Program Protection Protection' hanakanana ny fiovan'ny vidin-javatra, ny fisondrotan'ny vola, ny counterparty, ny fifanarahana, ny ara-bola, ny trosa, ny tsena, ny fatiantoka, ny fampandehanana, ny ara-dalàna, voajanahary, ny valanaretina viriosy ary ny risika politika. Eritrereto hoe tsy mahomby ny fampiasam-bolanao na miatrika fatiantoka na inona na inona antony. Amin'izay dia azo antoka 100% ianao hamerina ny sandam-bola feno amin'ny fampiasam-bolanao rehetra na dia tsy manam-bola na bankirompitra aza ilay orinasa nampanjarianao vola.
Ny programa fiarovana amin'ny famatsiam-bola dia afaka manampy amin'ny alàlan'ny fitarihana famatsiam-bola lavitry ny loza mety hitranga voalohany ary matetika no voalohany mahatsapa ny orinasa amin'ny olana ara-bola. Ny fampahalalana toy izany dia mety hampihena ny fampahalalana na farafaharatsiny mba hahazoana antoka fa tsy ampitomboina amin'ny fotoana tsy mety izy io!
azonao atao GARANTIE A ROI HIGH ON INVESTMENT rehetra
Azonao atao ny miantoka ny fahombiazana sy ny tombom-barotra amin'ny fampiasam-bolanao rehetra sy ny asanao amin'ny alàlan'ny fanatanterahana fiverenana amin'ny laoniny azo antoka sy azo antoka amin'ny alàlan'ny 'Program Protection Protection' alohan'ny hanaovana fampiasam-bola. Miaraka amin'ny Programa momba ny fiarovana ny famatsiam-bola, ny mpampiasa vola dia afaka mahazo fiadanan-tsaina ary mampifantoka ny sain'izy ireo amin'ny zavatra tsara indrindra vitany - ny fikarohana sy ny fitrandrahana ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasam-bola vaovao izay mety ho noheverina ho mampidi-doza loatra.
HAMPITADIAVA INDRINDRA HATRANY HATRANY 1,000%
Raha miaro ny fampiasam-bola ny Program Investment Protection, ny orinasa dia afaka mampiasa vola 10X bebe kokoa na mandeha amin'ny fotoana mety hampiasana fampiasam-bola vaovao izay noheverina ho mampidi-doza loatra. Noho izany, ny orinasa dia afaka mampitombo ny fampiasam-bola hatramin'ny 1,000% ao anatin'ny 30 andro. Izy io dia afaka manome fiarovana anao amin'ny loza mety hitranga amin'ny fanondranana, manampy anao hiditra amin'ny firenena vaovao, ary hitombo ny varotra amin'ny alàlan'ny famelana ny teny fifaninanana bebe kokoa hatolotra ny mpanafatra noho ny azo ekena fa tsy misy risika.
mahazoa FANANAN-KEVITRA MANAO TRANO ATAO
Ny Program Protection Protection dia afaka manatsara ny fifandraisan'ny orinasa iray amin'ireo mpampindrana azy amin'ny alàlan'ny fanomezana fiarovana ny banky sy ireo mpampindram-bola hafa amin'ny famatsiam-bola. Ny banky matetika dia hampindrana renivohitra bebe kokoa amin'ny fe-potoana ara-bola tsara kokoa amin'ny famatsiam-bola arovana.
Ny programa fiarovana ny fampiasam-bola dia mampiseho amin'ny banky, mpampindram-bola, mpamatsy vola ary mpanjifanao fa filokana azo antoka ianao. Raha misy tsy mety amin'ny orinasanao dia manana fomba azo antoka ianao hanonerana azy ireo amin'ny alàlan'ny IPP.
anao manokana INVESTMENT YIELD INTSONY TSY MISY RISIKO LEHIBE
Ny fampiasam-bola avo lenta dia fampiasam-bola mifandraika amin'ny ambaratonga avo kokoa amin'ny fampodiana. Ny fiverenana avo kokoa matetika dia midika ho risika avo kokoa noho ny fiverenana sy ny risika miaraka. Miaraka amin'ny Programa momba ny fiarovana ny fampiasam-bola, ny mpampiasa vola dia afaka mampiasa vola amin'ny famatsiam-bola avo lenta ary mankafy ny fiverenana avo lenta amin'ny fampiasam-bola tsy misy risika mifanaraka amin'izany.
Arovy ny fidiram-bolanao, ny tombotsoanao, ny onjam-bola, ny kapitaly ary ny asa ataonao
Ny 'Program Protection Protection' dia miaro amin'ny fidinan'ny fidiram-bola, ny fividianana vola ambany, ny tombom-barotra ambany ary ny fatiantoka ara-bola. Miaraka amin'ny 'Program Investment Protection', azonao atao ny manome antoka ny fidiram-bola azo tombanana sy tombony ho an'ny orinasanao mandritra ny 12 volana ary hofoanana ny singa tsy azo antoka, tsy fahombiazana, fivarotana ambany, fividianana vola ambany, tombony ambany, fatiantoka ara-bola ary risika amin'ny orinasanao.
Ny Programa momba ny fiarovana ny fampiasam-bola dia manome onitra raha misy fatiantoka tsy ampoizina, ka miaro ny vola miditra, ny tombom-barotra, ny taratasy mizana ary ny mpiasa amin'ny tranga mety hanimba ara-bola. Noho izany, ny programa fiarovana amin'ny fampiasam-bola dia mety ho fampiasam-bola hendry indrindra azon'ny orinasanao atao mba hiarovana ny tombom-barotra, ny vola, ny renivohitra ary ny asany.
INVESTAENT $ 18B natolotra ho an'ny orinasa iray menaka sy GAS